भारी मात्रामा घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कती ? – ramechhapkhabar.com
भारी मात्रामा घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कती ?
सुनको भाउ आज फेरि ६ सय रुपैयाँले बढेको छ । हिजो तोलामा ८५ हजार ६ सय रुपैयाँमा झरेको सुनको भाउ आज फेरि ६ सय रुपैयाँले बढेर ८६ हजार २ सय रुपैयाँमा पुगेको हो ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ । तोलामा चाँदी आज १५ रुपैयाँले बढेर १२ सय ७० रुपैयाँमा पुगेको छ ।
ओपोको बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन ‘ओपो–एफ१९ प्रो’ भारतीय बजारमा सार्वजनिक हुने भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम जागरणका अनुसार यो फोन सोमबार सार्वजनिक हुने भएको हो। फोन सोमबार (आज) राति ७ बजे सार्वजनिक हुने जागरणले उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले ‘ओपो–एफ१९ प्रो’ र ‘ओपो–एफ१९ प्रो’ प्लस सार्वजनिक गर्नेछ।
यी दुई स्मार्टफोनमा पञ्चहोल डिस्प्ले छ। फोनमा चार क्यामरा छन्। मूख्य क्यामरा ६४ मेगापिक्सलको छ। यी फोनले ५ जी सपोर्ट गर्नेछ। फोनमा मिडिया टेक प्रोसेसर छ। फोनको डिस्प्ले ६.४ इञ्चको छ। ग्राहकले यो ८ जिबी र्याम र २५६ जिबी स्टोरेजमा पाउँछन्। त्यस्तै फोनमा ५ हजार एमएएच ब्याट्रीका साथै ५० वाट फास्ट चार्जिङ सुविधा छ।
कम्पनीले यो फोन नेपालमा पनि सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। हालसम्म कम्पनीले उत्पादन सार्वजनिक गर्ने मितिका बारेमा भने कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन। तर यही महिना भित्रै उत्पादन सार्वजनिक हुने सम्भावना प्रबल देखिएको कम्पनीले बताएको छ। यसमा अल्ट्रा स्लिम बडी डिजाइन तथा अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि समावेश गरिने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले एफ सिरिज नेपालमा पहिलो पटक सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको थियो।